ओलीको देवत्वकरण र एकता – TajaNepal
Home /Blog/ओलीको देवत्वकरण र एकता
एमाले–माओवादी एकताको बाजा घन्किरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हेपाहा शैली प्रदर्शन भयो । प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा सरकारका निर्णयहरूका बारेमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीले स्वीकृत गरेपछि त्यस्ता निर्णय मन्त्रिपरिषद्का हुन्छन् । प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले थाहा पाएर धेरै निर्णय गर्न सक्छन् । तर ती निर्णयहरूमा विभागीय मन्त्रीसँगको परामर्श महत्वपूर्ण मानिन्छ । लोकतन्त्रको सर्वसम्मत विधि भनेको छलफलबाट प्राप्त उपलब्धिको कार्यान्वयन हो ।
यस पटक प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीको हेपाहा शैली उदाङ्गिन थालेको छ । ओलीको यो व्यवहार निरन्तर रहँदा हुन लागेको पार्टी एकताको झ्याली पनि शङ्काको भण्डारमा पु¥याउँदैछ । हेपाहा शैलीका खड्ग ओलीले आफ्नै पार्टीमा त कसलाई कुन बेला कहाँ कसरी थन्क्याउने भन्ने निशाना बनाउँछन् । गएको चुनावमा ओली पक्षका उम्मेदवारले राम्रै खर्च पाएको बताइन्थ्यो । वरिष्ठ नेता वामदेव गौतमलाई चुनाव जितेको खण्डमा ओलीको बाटो छेक्लान् भन्ने शङ्कामा चुनावमा पराजित गराइयो । बर्दियामा एमाले र माओवादीको बर्चस्व रहेको छ । कम्युनिस्ट मत पनि छ । चुनाव जित्छ काँग्रेस, हार्छन् वामदेव । बर्दिया चुनाव प्रकरणको छानबिन भएन । पार्टीको महाधिवेशनमा वामदेव र ईश्वर पोखरेल नै हुन्, ओलीविरुद्ध चुनावमा उठ्ने (अध्यक्ष पदमा) को जनमत जफत गराइन्छ भनेर भाषण ठोक्ने । संयोगवश संसद्को चुनावमा वामदेव पछारिए तर महासचिव ईश्वर पोखरेलले चुनाव जिते, झन्डै रक्षामन्त्री पनि नपाउने वातावरण बन्दै थियो । पार्टीको महासचिव जस्तो पदको नेतालाई सङ्गठनकै निम्ति पनि रक्षाभन्दा अन्य कामयावी मन्त्रालय दिलाउनुपर्ने हो । ईश्वरलाई त्यो रक्षा मन्त्रालय पदीय हैसियतमा ठीक हो कि होइन ? अब विवादको विषय रहेन । उनलाई एक पद मन्त्री चाहिएको थियो, सेना मन्त्रालय प¥यो, पैसा पाइन्छ जति पनि ।
एमाले र माओवादीबीचको पार्टी एकताको बहस टुङ्गिएको समयमा त एकता घोषणा हुन्छ नै तर हेपाहा नीति र हेपाहा चरित्र ओलीका गुण हुन् । त्यहाँ सिद्धान्त छैन, विचार छैन । कार्यक्रम भनेका स्थानीय तहसम्म सत्तामा पुग्ने र जनताको सेवा गर्ने भन्नेमै केन्द्रित छ । भ्रष्टाचार, महँगीका बारेमा धारणा छैन । कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त, नीति, विचार र कार्यक्रमले राजनीतिक स्पष्टता दिलाउँछ । यस पटक नेकपा एमाले र माओवादीका नेताहरूले सिद्धान्त, विचार, नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा चर्को बहस, मन्थन, सुझाव र सल्लाह लिएका छैनन् । वामपन्थीहरूको बर्चस्व रहेको राष्ट्रिय राजनीतिमा कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यक्रमलाई लोकतन्त्रमा समाहित गर्ने प्रगतिशील कार्यक्रमले जनता प्रभावित पार्नुपथ्र्यो । हेपाहा प्रवृत्ति खड्ग ओलीको अहङ्कार हो । ओलीले एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदमा बसेर सबैलाई मिलाउनुपर्नेमा भड्काउने पो हुन् कि भन्ने शङ्का छ । २१औँ शताब्दी कोही कसैको हेपाइमा पर्न रुचाउँदैन । एमालेले हेप्दा माओवादीलाई घाटा छैन । किनकि संसद्को तेस्रो शक्ति एमालेकै कारण भएको भनिन्छ भने एमाले पहिलो शक्ति माओवादीकै कारण भएको हो । एमाले एक्लै चुनाव लड्दा कति सिट ल्यायो, सबैलाई थाहा छ । अध्यक्ष खड्ग ओलीको व्यवहार कम्युनिस्टहरूबीचको एकताभन्दा भड्काउनु हो । उनले संविधानसभाको चुनावमा प्राप्त परिणामलाई वामपन्थीसँग एकतामा परिणत गर्न जरुरी ठानेनन्, काँग्रेससँग मिलेकै हुन् । तर उनलाई प्रधानमन्त्री बन्न माओवादीले गुन लगायो । उनले त्यो गुन माओवादीलाई तिरेका थिएनन् । तर पनि एकाएक माधव नेपाल, वामदेव गौतम, विष्णु पौडेल, भीम रावल एमालेका र माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ, टोपबहादुर रायमाझीलगायतका नेताहरू पार्टी एकताका लागि जहाँ खटे, त्यहाँ सफल पनि भए । उनीहरूको त्यो सफलतालाई एकता भाँड्ने बाटोमा लगिन्छ भने माओवादी ओलीको सती नगए हुन्छ । एकताको कुरा हरेक स्थानमा समानताको आधारमा हुन्छ । चुनावमा जितेको सिट सङ्ख्या र पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरूको सङ्ख्यालाई आधार बनाइन्छ भने त्यहाँ एमालेले पेल्छ । जनवर्गीय सङ्गठनहरूको पनि ताल त्यही हुने हो । पेसागत संस्थामा पनि एमालेको प्रवृत्ति त्यही हो । ओली गुटको एमालेकै कारण आफैँले कबोल गरेको नेपाल पत्रकार महासङ्घमा अध्यक्ष पद छाड्न प्रेस चौतारीले मानेन । नेपाली पत्रकारले प्रेस चौतारीलाई लगातार पदमा पु¥याए तर महासङ्घको पछिल्लो नेतृत्वमा चौतारीको दादागिरी चलेन, किन ? अहिले पनि पत्रकार महासङ्घको नयाँ ढाँचाअनुसार वैशाख २२ गते प्रादेशिक निर्वाचन हुँदैछ । तर प्रदेश– ३ को चार प्रदेश प्रतिष्ठान, एसोसियट, उपत्यका, मोफसलका १० जिल्ला गरी बन्ने प्रदेश समितिको अध्यक्ष प्रेस चौतारीले प्रेस सेन्टरलाई सहजरूपमा दिने अवस्थामा छैन । किनकि चौतारीको दादागिरी नरुचाएर धेरैले सदस्यता नवीकरण गरेका छैनन् । आफू सधैँ ठूलो सशक्त ठान्ने भीडको आधारमा लिने तर वैचारिक रूपमा कहीँ कतै स्पष्ट नरहेको एमाले राष्ट्रिय तहका कैयौँ मुद्दाहरूमा दृढ अठोट र स्पष्ट धारणा भएको देखिँदैन । मानवअधिकारको रक्षाको नाममा खोलेका एनजीओ र आइएनजीओको कमाइ खाने माध्यम माओवादी बन्दै आएको छ । उज्जन श्रेष्ठ हत्या प्रकरणमा माओवादीका बालकृष्णा ढुङ्गेललाई जेल हालेर इन्सेकले कति खायो ? दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीचको एकता हुँदा देशले प्राप्त गर्ने शान्ति, स्थिरता र विकासको एजेन्डाले महत्व पाउँछ । त्यो बेला गरिबी, भोकमरी,
आतङ्क, युद्ध, आन्दोलनका नाममा नेपालको तस्बिर देखाएर पश्चिमाहरूसँग डलर खाने इन्सेक, एड्भोकेसी फोरमहरूको अवस्था के हुन्छ ?
अध्यक्ष खड्ग ओलीको देवत्वकरणका लागि एमाले ओली गुटले चलाएको चरम गुटबन्दीको अन्त्य हुन्छ–हुँदैन थाहा छैन । कम्युनिस्ट पार्टीमा देवत्वकरणको अर्थ हुन्न । राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौम अखण्डतभित्र शान्ति,
सुशासन र रोजगारी जस्ता सर्वस्वीकार्य कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्नु कम्युनिस्ट पार्टी एकताको सार्थकता हो ।